MALAWI: Zimbabwe unrest hurts regional businesses; cross border freighters hit as roads blocked - NewZimbabwe.com MALAWI: Zimbabwe unrest hurts regional businesses; cross border freighters hit as roads blocked - NewZimbabwe.com
MALAWI: Zimbabwe unrest hurts regional businesses; cross border freighters hit as roads blocked
24th January 2019 Business, Economy, Markets
LILONGWE: As Zimbabwe’s unrest reaches unprecedented levels, the country’s neighbours are feeling the economic pinch with some businesses starting to close shop.
The Economics Association of Malawi (Ecama) said the Zimbabwe unrest could trigger scarcity of some imported commodities, resulting in increased prices due to high transportation costs, The Nation reported.
The development comes as Malawian traders using road transport through Zimbabwe to and from South Africa were unable to proceed as protestors of the Zimbabwe fuel hike reportedly blocked roads. As a result many transporters, mostly buses and trucks, have cancelled their trips.